Topy Maso Eran-tany 13 Topy Maso Eran-tany
Misy vala mihoatra ny 80 ao India, niely manerana ny firenena. Ny sasany dia lehibe kokoa sy mora azon'ny hafa. Ireo zaridaina ireo dia malaza amin'ny mpitsidika, ary manolotra karazana zavamaniry sy biby isan-karazany.
Raha misy karazana biby manokana tianao, dia fantaro hoe aiza no ahitana azy ireo any amin'ireo Top Parks Jereo ny Wildlife any India. Ho an'ny traikefa manokana, mijanòna any amin'ny iray amin'ireo Top Wildlife and Jungle Lodges any India.
Ny fonja nasionalin'i India voalohany, i Corbett dia niorina tamin'ny 1936 tamin'ny alàlan'ny mpihaza tigra tigra Jim Corbett. Eo afovoan-tany izy io no avy ao Nainital ary fito ora avy any Delhi. Ny valan-javaboary dia lehibe iray ary manana faritra dimy. Iray faritra, Jhirna, misokatra isan-taona. Ny ambin'ny valan-tsambo dia mifarana mandritra ny môsonika. Ny fahafahana mahita tigra iray ao Corbett dia tsy lehibe fa misy biby hafa, ary azo atao ny safira elefanta. Ho an'ny biby fiompy tsara indrindra, mijanona lalina ao amin'ny tahiry ao amin'ny faritra Dhikala. Na izany aza, raha vahiny ianao dia vonona ny handoa avo roa heny ny tahan'ny fidiram-bola, miaraka amin'ny salanisa mora indrindra manodidina ny 2500 rupees amin'ny alina ho an'ny efitra manokana ao amin'ny trano fialofana ala. Misy fampahalalana bebe kokoa hita ao amin'ny tranonkalan'ilay valan-javaboary.
Jereo ny sarin'ny Corbett National Park
Jereo ny Hotel Corbett Special on Tripadvisor sy Save
Ranthambore dia mahavariana ny tantaran'ny tantara sy ny natiora. Ao anatin'ilay valan-javaboahary dia fiarovana lehibe izay naorina tamin'ny taonjato faha-10 ary noraisin'ny mpitondra maro noho ny toerana misy azy manokana eo avaratra sy afovoan'i India. Ny toeram-ponenana dia manavaka ny lemaka maniry sy ny hantsana mihetsiketsika. Manohana biby isan-karazany sy biby izy io, anisan'izany ny tigra 30 eo ho eo. Tena malaza io valan-javaboary io noho izy akaiky an'i Delhi ary ny tigra dia mora hita eo. Na dia izany aza, ny lazan'ny valan-javaboary dia niteraka resa-be sy tsy fitantanana ny safaris, izay olana sy zavatra azo tsapain-tanana.
Jereo ny Hotel Special Ranthambore ao amin'ny Traveladvisor sy Save
Ny National Park Kanha dia manome voninahitra ny fametrahana ny toerana ho an'ny bokin'i Rudyard Kipling, The Jungle Book . Manan-karena ny ala maitso sy ny ala honko, ny farihy, ny renirano ary ny ahi-maitso. Ity valan-javaboary lehibe ity dia heverina ho fandaharanasa fikarohana sy fiarovana, ary maro ireo karazana tandindonin-doza no voavonjy any. Ny tigra koa (ny fahitana ny iray dia nihanitombo tsindraindray nandritra ny taona vitsivitsy farany), ny zaridaina dia fantatra noho ny barasingha ( lavenona mivonto ) sy karazam-biby hafa sy vorona hafa. Tena tonga lafatra ho an'ireo tia ny natiora.
Jereo ny Hotel Kanha Special on Tripadvisor and Save
Park National Park, Madhya Pradesh
Ny Valan-java-bozaka nokarakarain'ny Pench National dia avy amin'ny renirano izay mivezivezy amin'ny ilany ary mizara izany any atsinanana sy atsinanana. Toy ny Kanha National Park, Pench koa dia mifandray amin'ny bokin'i The Jungle Book of Rudyard Kipling. Toerana feno hatsaran-tarehy voajanahary, manana toeram-pokontany malalaka, ala mikitroka ary zavamaniry matevina. Ity zaridaina tsara tantana ity dia nalaza noho ny renirano mikoriana ary toerana tsara hijerena ny vorona. Ny fijery Tiger dia mahazatra loatra amin'ny safari, miaraka amin'ny biby maro hafa. Ny fanintonana iray hafa dia ilay tanàna mpanefy tanety izay manakaiky ny vavahadin'i Turiya.
Jereo ny Hotely Special Pench amin'ny Departemanta sy Save
Park National Park Bandhavgarh, Madhya Pradesh
Ny Bandhavgarh dia tsara indrindra amin'ny toerana misy azy, ary koa manana ny tigra avo indrindra amin'ny valan-javaboary any India. Ny fonja dia ahitana lohasaha maitso sy havoana be tendrombohitra, ary misy toeram-panatobiana tranainy iray vita amin'ny 800 metatra (2,624 ft) mahery. Na dia sarotra aza ny mahatratra izany, ity valan-javaboary ity dia manome ny tanjona tsara indrindra amin'ny fahitana tigra.
Jereo ny Hotel Bandhavgarh Special Hôpitaly momba ny Tripadvisor sy Save
Ny ankamaroan'ny Valan-java-pirenena ao Kaziranga dia ahitana sambony sy ahi-maitso, ka mahatonga azy io ho toeram-ponenana tonga lafatra ho an'ny rhinoceros tokana. Ny ankamaroan'ny mponina manerana izao tontolo izao dia misy zavamananaina manan-tantaka efa ho 30 eo ho eo. Ity zaridaina malaza ity dia azo jerena amin'ny safari elefanta. Mipetraka eo amoron'ny reniranon'i Brahmaputra any amin'ny faritra avaratra atsinanan'i Inde izy, enina ora eo ho eo avy ao Guwahati.
Jereo ny Hotely Kaziranga Special on Tripadvisor ary Save
Park Sundarbans, Bengal Andrefana
Sundarbans, iray amin'ireo toerana mpizahatany any Bengal Andrefana , dia sangisangy amin'ny ala honko izay tsy misy afa-tsy karazany manerana izao tontolo izao. Ny ampahany indiana dia nahitana nosy 102 ary mihoatra ny antsasak'izy ireo no mipetraka. Ny Sundarbans dia azo henoina amin'ny sambo ary hijery azy io toy izany dia zavatra nahafinaritra izay tsy tokony hohadinoina. Aza manantena ny hahita tigra akory. Tena saro-kenatra izy ireo ary matetika mijanona ao anaty tahiry. Ny fanasongadinana dia mitoetra ao amin'ny trano fialan-tsasatra ambanivohitry ny tanàna ary mankafy ny fizahan-tany mifototra amin'ny fiarahamonina.
Ny Valam-pirenena manan-danja any Sundarbans India
7 Top mpitsidika any Sundarban Tours sy Packages
Top 5 Hotels and Resorts Sundarbans
Io lohasaha alpine avo lehibe io dia tsangambato hafakely izay miaina mandritra ny vanim-potoana monsoon miaraka amin'ny karazany 300 samihafa voninkazo alpine. Miseho ho toy ny lambam-pandrefesana mamirapiratra manohitra ny lolo marevaky ny tendrombohitra izy ireo. Ny Lohasahan'ny Flowers dia mitaky fitsangatsanganana henjana saingy hahatsapa eny an-tampon'izao tontolo izao amin'ity toerana mahagaga sy mamirapiratra ity!
Iray amin'ireo valam-pirenena malaza indrindra any Atsimo atsimo, Bandipur dia anisan'ny Nilgérés Biosphère Reserve. Indray mandeha izy no toerana fikarakarana ny maharajas tao Mysore. Ity kianja kilaometatra kilaometatra miisa 870 ity dia mandray mpizahatany be maro rehefa miala ao amin'ny Ooty avy ao Mysore. Manana tigra izy io, na dia tsy fahita firy aza. Azonao atao ny mahita ny serfa sy ny gidro amin'ny safari (ary angamba elefanta raha tsara vintana ianao).
Nagahole dia fantatra amin'ny anarana hoe National Park Rajiv Gandhi ary izy io koa dia ao amin'ny Nilgiri Biosphère Reserve. Ny reniranon'i Kabini dia eo anelanelan'i Bandipur sy Nagahole, ary tsy dia mahazatra loatra ny mahita elefanta elefanta eny amoron'ny renirano. Ny faritr'i Kabini an'i Nagarhole dia manana trano tsara tarehy safari tsara indrindra.
Ny valan-javaboarin'i Mudumalai, izay tsy lavitra an'i Ooty ao amin'ny distrikan'i Nilgiri ao Tamil Nadu, dia mizara ny sisintaniny amin'i Kerala sy Karnataka. Misy vorona vorona mihoatra ny 260 (anisan'izany ny voromailala) hita any, toy ny elefanta, tigra, serfa, gidro, lambo, bison, ary leopard. Ny trano fonenan'ny hazo dia endrika malaza amin'ny ankamaroan'ny trano manodidina ny Mudumalai.
Himalayan National Park, any Himachal Pradesh
Iray amin'ireo toerana lehibe hitsidihana an'i Himachal Pradesh , ny Valan-javaboahary Great Himalayan dia nanjary toerana manan-danja eran-tany UNESCO tamin'ny taona 2014. Ny loharano dia lohasaha efatra ary mandrakotra kilometatra maherin'ny 900 km. Ny sisin-tany lavitra, mikitoantoana ary tsy misy fikorontanana no mahatonga azy ireo hitady ny mpandeha fa ny ampahany faran'izay mampihetsi-po indrindra sy mahavariana ao anatin'ny faritra afovoany.
Ny valan-tserasera nasionaly iray hafa ao Madhya Pradesh, Park of the National Park Satpura dia iray amin'ireo ala voaaro vitsy monja ao India izay ahazoan'ny mpitsidika mandeha. Toerana mahafinaritra, tsy misy ny ordinatera mpizahatany. Ny lozam-pifamoivoizana ihany koa dia tena mampientanentana koa, miaraka amin'ireo sarona, riandrano ary sary hosodoko fahiny. Iray amin'ireo fiarahana tsara indrindra ny Duchess Falls Trail. Tena sarotra izany nefa homena valisoa mamelombelona ianao any am-piandohana. Ny hetsika hafa azo atao ao anatin'ny valan-javaboary dia ny fiaramanidina, jeep safaris, safarisina alina ary safarisà lakana. Raha tsy miraharaha ny mahita tigra iray ianao, ity toerana ity dia toerana mahafinaritra hankafizana ny natiora.
10 Popular Travel Adventure Activities in India
10 Curries Indianina Maniry Hatrany Manerana ny Firenena
Toro-làlana manan-danja ao amin'ny Hotely any amin'ny seranan'i India
8 Top Travel Destinations Indianina Monsoon
Top Travel Destinations India: Aiza no hanamboarana Til You Drop
Fantaro: Ho voamarina ve ny kaontim-bokinao amin'ny lisitry ny lisitra fidirana amin'ny lalamby indiana?
Toeram-pisakafoanana mahafinaritra any Phoenix
Ireo fiteny any Eoropa Atsinanana
Ny 4 Jolay amin'ny hetsika tao amin'ny Tafika LA sy ny Canyons
Fandevenana Tranofy: Trano fialam-boly mampiavaka
Andriamatoa Little Rock Valentine's Day
Fiara fitateram-bahiny mieli-paty matevina be any Etazonia
Toro-làlana manan-danja amin'ny fiaramanidina ao India
Ahoana ny hahazoanao pasipaoro na pasipaoro amerikana
Md Thomas any amin'ny Nosy Virgin Virgin (USVI)
5 Soso-kevitra ara-bola mahavelona amin'ny fitehirizana ny vidin-tsakafo
Iza no trano tsara indrindra amin'ny Internet?
Dallas Sid Pride 2016 - Dallas Black Gay Pride 2016
Fampahalalana fototra momba ny Lalao baolina fandaka Florida Gators